Mudane Qanyare dagaalka wadaadada ka hor wuxuu ahaa xidig ka iftiimayey Muqdisho
Buluugleey, March 28, 2006
Mudane Qanyare ayaa wuxuu si buuxda uga turjumayey fikirka ay qabaan beelaha degen Muqdisho, kaas oo si buuxda uga soo horjeedey in dalka la keeno ciidamo shisheeye, ama dadka laga qaado hubka iyadoo aysan jirin dowlad ay kalsooni ku qabaan, iyo in ciidamada safka hore loo soo adeegsado iney ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya.
Laab lakacii Col. C\_llahi Yusuf oo ahaa Muqdisho inuu xoog iyo duulaan ku qabsado waxaa si buuxda u hor istaagey laguna xasuusta kaaliintii siyaasadeed ee Mudane Qanyare uu mowqif adag uga istaagtey fikirka Col.C\_llahi.
Dad badan ayaa qaba soo ifbaxa uu Qanyare si muuqda uga soo dhex baxay hogaamiyeyaasha kooxaha Muqdisho iney tahay sababta keentay in Qanyare dagaal lala geliyo wadaadada si ay hoos ugu dhacdo taageeradii ay u wada hayeen dhamaan dadweynaha degen Muqdisho looguna soo koobo taageerada gaar ahaaneed ee uu ka helaya beeshiisa oo keliya.
Kadib markii ay hoos u dhacday taageerada loo hayey Mudane Qanyare ayaa Muqdisho waxey raadineysey hogaamiye kooxeed ay siyaasadiisa ka dhigan karto difaac ay isaga waabiso horornimada Col. C\_llahi Yusuf. Markiiba waxaa soo baxay Maxamed Dheere oo dadweynaha Muqdisho ugu muuqday inuu buuxin karo kaalintaas bananeed, nasiib darro kaalintiisa dagaal ee uu kula saftay Bashiir Raage ayaa meesha ka saartay hamigaas.
Mar kale ayeey dadweynaha reer Muqdisho waxey indhahooda dib ugu celiyeen Mudane Qanyare oo u muuqan kara inuu dib u soo ceshan karo kaalintiisa siyaasadeed ee uu hormoodka ugu ahaa dhamaan beelaha degan Muqdisho, taas oo imaan karta inuu nabada ku mideeyo dadka walaalaha ah ee wada degen Muqdisho.
Col. C\_llahi Yusuf oo aysan kuleyl ku hayn siyaasiyiinta Muqdisho ayaa aaminsan in ciidamo shiheeye ay hubka ka dhigaan dadka reer Muqdisho, wuxuu kaloo aaminsan yahay in inta uu ka helayo ciidamadaas shisheeye in hubka ku jira gacnaha hogaamiye kooxeedyada Muqdisho ay ku hayaan dano qaran, kaas oo ah ineysan kula dagaalameyn isaga, laakiin ay isku adeegsanayaan iyaga dhexdooda. Waxaana tusaale loo soo qaatay sida uu uga badbaadey inuu dagaal la galo dagaaloogaha Jowhar, haddana ay dhacday in wixii hub ahaa oo gacantiisa ku jirey in uu ku jeediyey qeyb ka mida beeshiisa oo dagaal dhexmaray isaga oo aan waxba ka hagran awoodiisa dagaal.
Muuse Suudi oo ah nin dhaqan la yuur ah ayaan sinaba ugu muuqan mid kaalintaas buuxin kara isaga oo aan ahayn nin ku wanaagsan dhismaha xeel siyaasadeed oo door weyn qaadan karta, wuxuuna u muuqda inuu yahay gabal sii dhacaya kana sii liicaya doorka siyaasada. dagaaloogahaas siyaasad la’aantiisu waxey ka horkeentay Cali Mahdi, Caydiid, Cabdiqaasim, wax rajo ahna lagama qabo inuu la yimaado siyaasad ka caafimaad qabta qabiil iyo caadada dhaqanka laga sii harayo oo xeerka u ah beelaha.
Waxey dad badan ay sugayaan in mudane Qanyare uu qaato door ka duwan kuwa ay qateen dagaaloogayaasha waqooyiga Muqdisho oo hubka u sita walaalahooda degan Muqdisho, uuna buuxiyo dhaqanka looga baahan yahay hogaamiye guud oo ah inuu u dagaalomo danaha dadkiisa intii uu la dagaalami lahaa dadkiisa.